Martech Zone »Ucwaningo, Thola, Funda Ubuchwepheshe Bezentengiso Nezentengiso
NgoMsombuluko, Julayi 31, 2006 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Ngithanda ukufuna nokudlulisa imininingwane. Nginezixuku zomndeni, abangane, engisebenza nabo kanye namakhasimende acela umbono wami futhi ngiyathanda ukubanika wona. Ngeshwa nginemibuzo eminingi nabantu abaningi abadinga usizo, noma kunjalo, kwesinye isikhathi ngisho nomndeni wami uyasangana ngokuthi angiphenduli. Kepha, yilokho engikwazi kahle khona. Ngithanda ukulalela. Ngithanda ukufunda. Ngithanda ukufunda. Nami
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Ngithenge iGoogle Map Hacks izolo kepha ngiphoxekile encwadini. Akulona iphutha lombhali, kepha incwadi isivele isiphelelwe yisikhathi selokhu kukhishwe iGeocoder yakwaGoogle kanye nohlobo 2 lweGoogle lwe-API. Bekunezixhumanisi ezimbalwa ezincwadini ngakho ngikwazile ukubheka inqwaba yamasayithi futhi ngabona ukuthi zikulungele kanjani ukukhishwa okusha. Nginguye
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu UMgqibelo uqala ngokuma kwami ​​okujwayelekile eBorder. Ngi-ode iGoogle Map Hacks ukuthi isuswe eAmazon ukuze ngisebenze kwezinye izixhumi zemephu ezidlulelwe yisikhathi ze-ResortPub kule mpelasonto. Ngi-ode ukuthunyelwa kwezinsuku ezimbili kepha incwadi ayifikanga… ilandelwe eColumbus, OH. Ngicabanga ukuthi lesi yisikhathi sokuqala ukuthi ngingatholi i-oda lami ku-Amazon ngesikhathi - ngithemba ukuthi ngeke kuphinde kwenzeke. Emuva ephuzwini lami… ngiseBorders nami
ULwesihlanu, July 28, 2006 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Ukufa okubuhlungu kukaMpozi Tolbert, 34, kuphenywa yizikhulu zase-Indiana State ukuthola ukuthi ngabe kukhona yini ukwephulwa kwe-OSHA. Angikaze ngihlangane noMnu Tolbert ngenkathi ngisebenza eThe Star, kodwa ngangisesikhetsheni izikhathi ezimbalwa nalesi sidlakela esimnene. Ngiyakhumbula ukuthi ama-dreadlocks akhe ayengathatha uhhafu wekheshi! Wonke umuntu ovela egumbini lezindaba wayemomotheka futhi athi sawubona lapho eseduze. Ngangifundile ukuthi uMpozi uyaziwa
Umphumela we-Digg: Okuqukethwe Okuhle + Zokuxhumana Komphakathi = AMAKHAYA AMAKHULU
NgoLwesine, July 27, 2006 NgoLwesine, Januwari 5, 2017 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Umphumela we-Digg ungomunye ovame ukuxoxwa ngawo. Abantu abaningi bacindezela ukwenza iDigg, kepha ingabe yindlela enhle yokuthola ukufundwa? Nakhu okwenzekile lapho isiza sami bekuyi-'Dugg '.
Okudlule 1 ... 1,010 1,011 1,012 ... 1,022 Okulandelayo →
Ikhasinkomba 1011 of 1022